समाचार ट्याग गरिएको "ज्ञान र ज्ञान" - उल
सर्वश्रेष्ठ खेल घटनाहरू २०२१ मा फिर्ता आएका छन्!
ध्यान एथलीटहरू! को खेल घटनाहरू तपाइँ केको लागि प्रतिक्षा गरिरहनु भएको थियो? उनीहरूसँग पहिले नै २० celebration१ को उत्सवको मिति छ। के तपाईंले त्यसलाई समातिसक्नु भएको छ? हो, खेल र साहसिक पूरा वर्ष आउँदैछ! घटनाहरूको सूचीमा हेर्नुहोस् जुन पात्रोमा पहिले नै उनीहरूको नयाँ प्रोटोकल र मिति स्थापना भइसकेको छ।
स्कीइ or वा स्नोबोर्डिaखेल होईन। यी चरम खेलहरू हुन् जसलाई इष्टतम तयारी र सर्तहरूको आवश्यक पर्दछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो केही लगायतका लगाउने उपकरणहरूमा राम्रो गुण समावेश गर्नुहोस् चुम्बकीय चश्मा।
फ्यानहरू उनीहरूको तयारी गर्छन् स्नोबोर्ड चश्मा पूर्ण रूपमा रमाईलो गर्न स्की मौसम यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् जुन युरोपमा सब भन्दा आश्चर्यजनक ट्र्याकहरू हुन्! के तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ कि ती मध्ये कुन मनपर्दो छ?
दुबै प्रोफेश्नल र शुरुआती स्कीयरहरूले स्की गग्गलहरूको साथ उनीहरूको दृष्टि सुरक्षित गर्नुपर्दछ कुनै श doubt्का बिना यो यो समयको लागि तपाइँलाई नवीकरण गर्ने समय हो। पढ्ने छोड्नुहोस् र उत्तम लगाउने फाइदाहरू पत्ता लगाउनुहोस् स्की गगल्स २०-२१!
के तपाइँ पहिले नै निश्चित हुनुहुन्छ जुन तपाइँको मनपर्ने स्नोपार्क हुनेछ? वा किन तपाईले सिफारिस गर्नु भएको यी सबै महान व्यक्तिहरुमा प्रयास गर्नुहुन्न? एजेन्डा प्राप्त गर्नुहोस् र हिउँमा आफ्नो getaways योजना। हजारौं कारखाना, जम्प, pirouettes र डाउनराइटहरू प्रायद्वीपको बिभिन्न स्टेशनहरूमा तपाईंको पर्खिरहेका छन्। र आफ्नो स्की मास्कहरू ल्याउन नबिर्सनुहोस्!
को स्की मौसम २०२० / २०२० सुरु हुन लागेको छ! स्की रिसोर्ट्स हप्ताहरु को लागी एक सुरक्षित प्रोटोकोल विकसित गरीरहेको छ सुरक्षित रुपमा खोल्न को लागी ... र तपाइँको हिउँ चश्मा उनीहरू यस बर्ष संक्रामक जोखिम कम गर्न एक आवश्यक तत्व हुनेछन्।
यदि तपाईं अझै जाडो खेलहरूमा सुरू गर्ने बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने, यो कहिले सुरु गर्ने भनेर छनौट गर्दा तपाईंको प्राथमिकताहरूको समीक्षा गर्न ढिलाइ हुन्न, कुन मोडलिटीले तपाईंलाई उत्तम सूट गर्छ र बुझ्नुहोस् यदि तपाईं आफ्नो पहिलो किन्नु पर्छ भने। स्की चश्मा वा तपाइँको हिउँ चश्मादुबै खेलको बारेमा यहाँ थोरै कुरा फेला पार्नुहोस्!
El फ्रिराइड को मोडलिटी हो स्नोबोर्ड जसमा तपाईं पूर्ण रूपले अफ पिस्टे वंश, कुमारी हिउँमा, राम्रोसँग गर्नुहुन्छ हिउँ चश्मा, हाम्रो मार्गमा आउने सबै चट्टानहरू र अवरोधहरूलाई बेवास्ता गर्दै। वर्तमानमा त्यहाँ फ्रेट स्नोबोर्डि tests परीक्षणहरू र कोरिएका मार्गहरूमा प्रतिस्पर्धाहरू छन्।
यदि तपाईं यस संसारमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ स्नोबोर्डि, वा तपाइँ तपाइँको पुरानो बदल्न चाहानुहुन्छ हिउँ चश्मा राम्रोको लागि, अधिक अनुकूलित र प्रतिरोधीहरू किनभने हामीसँग तपाईंसँग छनौट गर्न उत्तम सूत्र छ सबै भन्दा राम्रो तपाईंको जीवनको स्नोबोर्ड चश्माहरू! तपाई अझ बढी जान्न चाहानुहुन्छ? तपाईलाई steps चरणमा छनौट गर्नुहोस्!
हिउँमा चरम खेल अभ्यास गर्दा राम्रो स्की मास्क लगाउनु आवश्यक छ। के तपाइँ स्किइंग गर्दा प्रकृतिको जोखिमलाई हटाउन तयार हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ? Most सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षणहरू पत्ता लगाउनुहोस् जसमा तपाईं अवश्य पनि सबै भन्दा राम्रो लिई प्रशंसा गर्नुहुन्छ हिउँ चश्माहरू!
क्यारी स्की चश्माहरू आवश्यक छ जब हामी यस खेललाई यसको कुनै पनि ढाँचामा अभ्यास गर्छौं। के तपाईंलाई थाहा छ उनीहरू के हुन्? Las स्की रूपहरू? उत्तम स्किडहरू पत्ता लगाउनको लागि पढ्नुहोस् जुन तपाईं स्की गर्न सक्नुहुन्छ र पत्ता लगाउनुहोस् कि किन तपाईं जहिले राम्रो प्रयोग गर्नुहुन्छ स्की चश्माहरू सुरक्षात्मक!